Maxa ka soo baxay kulankii Xaaska Cabdikarin Guled iyo Fahad Yasin? | SMC
Home WARARKA MAANTA Maxa ka soo baxay kulankii Xaaska Cabdikarin Guled iyo Fahad Yasin?
Waxaa labadii asbuuc ee la soo dhaafay kulamo gooni-gooni oo qaarsoodi ah u socdeen Xaaska Cabdikarin Guleed, oo ah Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Pakistan Khadija Mohamed Almakhzoumi. Kulamadaan ayaa wxa ay daba socdeen heshiis horay u dhexmaray Fahad Yasin iyo Cabdikarin Guled kaas oo ahaan in Fahad ka dhigo Cabdikarin Madaxweyanaha kagu badali doono MW Farmaajo.
Dhaqaalaha ku baxa ololaha Cabdikarin Guled ayaa waxa hada si buuxda u bixiya Fahad Yasin. Dhanka kale Fahad ayaa markii sadaxaad labo asbuuc ka hor waxa uu Cabdikarin geeyay Magalaada Doha si looga iibiyo hogaanka iyo sirdoonka dalka Qatar. MOL ma helin faah-faahin ku saabsan wixii ka soo baxay kulamadaas.
Hadaba markii sadaaxaad asbuuc gudahood ayaa waxaa kulamo qaatay mudo saacado ah waxa uu dhex maray Fahad iy Khadiijo kaas oo ka dhacay xarunta NISA ee magalaada Muqadsho. Horayna waxa ay ugu kulmeen magalooyinka Doha iyo Istanbul.
Kulankii ugu danbeeyay oo qaatay mudo ka badan afar saacadood ayaa asbuucii hore waxa uu ka dhacay Xarunta NISA kaas oo iyada iyo Fahad oo kali ah la isaga tagay, iyada oo ayan la joogin cid sadaxaaad. Cabdikarin Guled ayaa la rumeysan yahay in uu shaqeeyo Fahad Yasin islamarkaana uu yahay qof-ka waxa luuqada Ingiriiska lagu yirahado “Plan B”, qorshaha labaad hadii Farmaajo socon waayo.
Previous articleMareykanka oo War Cusub kasoo saaray duqeyn uu ka fuliyay Shabeellaha Hoose
Next articleWararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Afgooye